19.10.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– तिमी अहिले धेरै-धेरै साधारण रहनु छ , फेशनदार महँगा कपडा पहिरिंदा पनि देह-अभिमान आउँछ।”
तकदिरमा उच्च पद छैन भने कुन कुरामा बच्चाहरूले अल्छी गर्छन्?
बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! आफूलाई सुधार गर्नको लागि चार्ट राख। यादको चार्ट राख्दा धेरै फाइदा हुन्छ। नोटबुक सदा हातमा होस्। चेक गर– कति समय बाबालाई याद गरेँ? मेरो रजिस्टर कस्तो छ? दैवी चरित्र छ? कर्म गर्दा बाबाको याद रहन्छ? यादबाटै खिया निस्कन्छ, उच्च तकदिर बन्छ।
प्यारा बाच्चाहरूसँग यी लक्ष्मी-नारायणका चित्र घरमा अवश्य हुनुपर्छ। यिनीहरूको चित्र देखेर धेरै खुसी हुनुपर्छ किनकि तिम्रो यो पढाइको लक्ष्य-उद्देश्य हो। तिमीलाई थाहा छ– हामी विद्यार्थी हौं, ईश्वरले पढाउनु हुन्छ। ईश्वरीय स्टुडेन्ट वा विद्यार्थी हौं, हामीले यो पढिरहेका छौं। सबैको लागि यो एउटै उद्देश्य छ। यिनीहरूलाई देखेर धेरै खुसी हुनुपर्छ। गीत पनि बच्चाहरूले सुन्यौ। धेरै नै भोलानाथ हुनुहुन्छ। कसै कसैले शंकरलाई भोलानाथ सम्झन्छन् फेरि शिव र शंकरलाई मिसाइदिन्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ– शिव उच्च भन्दा उच्च भगवान र शंकर देवता फेरि दुवै एउटै कसरी हुन सक्छन्? यो पनि गीतमा सुन्यौ– भक्तहरूको रक्षा गर्ने, अवश्य पनि भक्तहरू माथि कुनै आपद छ। ५ विकारहरूको आपद सबैमाथि छ। भक्त पनि सबै हुन्। ज्ञानी कसैलाई भन्न सकिँदैन। ज्ञान र भक्ति बिल्कुलै भिन्नै चीज हुन्। जसरी शिव र शंकर भिन्नै हुन्। जब ज्ञान मिल्छ तब भक्ति रहँदैन। तिमी सुखधामको मालिक बन्छौ। आधाकल्पको लागि सद्गति मिल्छ। एकै इशाराबाट तिमीले आधाकल्पको वर्सा पाउँछौ। देख्छौ– भक्तहरूलाई कति कष्ट छ। ज्ञानबाट तिमी देवता बन्छौ फेरि जब भक्तहरूलाई कष्ट हुन्छ अर्थात् दु:ख हुन्छ तब बाबा आउनु हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– ड्रामा अनुसार जे बितेर गयो त्यो फेरि दोहोरिन्छ। फेरि भक्ति सुरु हुन्छ अनि वाममार्ग सुरु हुन्छ अर्थात् पतित बन्ने मार्ग। त्यसमा पनि पहिलो नम्बर हो काम, जसलाई नै भनिन्छ काममाथि विजय पाउनाले तिमी जगतजित बन्छौ। उनले विजय कहाँ पाउँछन् र। रावण राज्यमा विकार विना त कसैको पनि शरीर पैदा हुँदैन, सत्ययुगमा रावण राज्य हुँदैन। त्यहाँ पनि यदि रावण राज्य भयो भने भगवानले रामराज्य स्थापना गरेर के गर्नुभयो? बाबालाई कति ख्याल रहन्छ। मेरा बच्चाहरू सुखी रहून्। धन जम्मा गरेर बच्चाहरूलाई दिन्छन् जसबाट सुखी रहून्। तर यहाँ त यस्तो हुन सक्दैन। यो हो नै दु:खको दुनियाँ। यहाँ बेहदका बाबाले भन्नुहुन्छ– तिमीले त्यहाँ जन्म-जन्म सुख भोग्दै आउँछौ। अथाह धन मिल्छ, २१ जन्म त्यहाँ कुनै दु:ख हुँदैन। कंगाल हुँदैनन्। यी कुरा बुद्धिमा धारण गरेर मनमा धेरै खुसी हुनुपर्छ। तिम्रो ज्ञान र योग धेरै गुप्त छ। स्थूल हतियार आदि केही पनि छैन। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– यो हो ज्ञान तरबार। उनीहरूले फेरि स्थूल हतियारका निशानी देवीहरूलाई दिएका छन्। शास्त्र आदि जसले पढ्छन् उनीहरूले कहिल्यै यस्तो भन्दैनन्– यो ज्ञान तरबार हो, यो ज्ञान खड्ग हो। यो कुरा बेहदका बाबाले नै बसेर सम्झाउनु हुन्छ। उनीहरूले सम्झन्छन्– शक्ति सेनाले विजय प्राप्त गरे त्यसैले अवश्य कुनै हतियार हुनुपर्छ। बाबा आएर यी सबै भूलहरू बताउनु हुन्छ। तिम्रा यी कुरा धेरै मनुष्यहरूले सुन्छन्। विद्वान् आदि पनि एक दिन आउने छन्। बेहदका बाबा हुनुहुन्छ नि। तिमी बच्चाहरूलाई श्रीमतमा चल्दा नै कल्याण छ तब देह-अभिमान टुट्छ, त्यसैले धनवानहरू आउँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ– देह-अहंकार छोड। राम्रा कपडा आदिको पनि नशा हुन्छ। तिमी अहिले वनवाहमा छौ। अब जान्छौ घर। त्यहाँ तिमीलाई धेरै गहना पहिराउँछन्। यहाँ महँगा कपडा पहिरिनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ– बिल्कुलै साधारण रहनु छ। जस्तो कर्म मैले गर्छु... तिमी बच्चाहरू पनि साधारण रहनु छ। नत्र देहको अभिमान आउँछ। ती सबैले धेरै हानि गरिदिन्छन्। तिमीलाई थाहा छ– हामी घर जान्छौं। त्यहाँ हामीलाई धेरै गहना मिल्छन्। यहाँ तिमीले गहना आदि पहिरिनु छैन। आजकल चोरी आदि कति हुन्छ। बाटैमा डाँकाले लुट्छन्। दिन-प्रतिदिन यो हंगामा आदि धेरै बढ्दै जानेछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। देह-अभिमानमा आउनाले बाबालाई बिर्सिन्छौ। यो मेहनत अहिले नै हुन्छ। फेरि भक्तिमार्गमा यो मेहनत गर्नु पर्दैन।
अहिले तिमी संगममा छौ। तिमीलाई थाहा छ– बाबा आउनु हुन्छ नै पुरुषोत्तम संगमयुगमा। लडाईं पनि अवश्य हुन्छ। एटोमिक बम आदि खुब बनाइरहन्छन्। यो बन्द होस् भनेर जति कोसिस गरे पनि यस्तो हुन सक्दैन। ड्रामामा निश्चित छ। बुझाएर पनि बुझ्दैनन्। मृत्यु हुनु नै छ भने बन्द कसरी हुन्छ? बुझेर पनि बन्द गर्दैनन्। ड्रामामा निश्चित छ। यादवहरू र कौरवहरू समाप्त हुनु नै छ। यादव हुन् युरोपवासी। उनीहरूको हो विज्ञानको घमण्ड, जसद्वारा विनाश हुन्छ। फेरि विजय हुन्छ साइलेन्स घमण्डको। तिमीलाई शान्ति घमण्ड (शान्त स्वरूप) मा रहन सिकाइन्छ। बाबालाई याद गर– गहन शान्ति (डेड साइलेन्स)… म आत्मा शरीर भन्दा भिन्न हुँ… शरीर छोड्नको लागि हामीले मानौं पुरुषार्थ गर्छौं, यसरी कसैले शरीर छोड्नको लागि पुरुषार्थ गर्छन् र? सारा दुनियाँमा खोजेर आऊ, कोही छ जसले भनोस्– हे आत्मा अब तिमीले शरीर छोडेर जानु छ। पवित्र बन। नत्र सजाय खानुपर्छ। सजाय कसले खान्छ? आत्माले। त्यतिबेला साक्षात्कार हुन्छ। तिमीले यो-यो पाप गरेका छौ, सजाय खाऊ। त्यतिबेला अनुभूति हुन्छ, मानौं जन्म-जन्मान्तरको सजाय मिलिरहेको छ। यति दु:ख भोग्नु, बाँकी सुखको ब्यालेन्स के रह्यो? बाबा भन्नुहुन्छ– अब कुनै पाप कर्म नगर। आफ्नो रजिस्टर राख। हरेक विद्यालयमा चालचलनको रजिस्टर राख्छन् नि। शिक्षा मन्त्रीले पनि भन्छन्– हाम्रो देशको चरित्र ठीक छैन। भन, हामीले यी लक्ष्मी-नारायणको जस्तो चरित्र बनाउँछौं। यी लक्ष्मी-नारायणको चित्र त सदा साथमा हुनुपर्छ। यो हो लक्ष्य-उद्देश्य। हामी यस्तो बन्छौं। यो आदि सनातन देवी-देवता धर्मको हामीले स्थापना गरिरहेका छौं, श्रीमत अनुसार। यहाँ चालचलन सुधारिन्छ। तिम्रो यहाँ कचहरी पनि हुन्छ। सबै सेवाकेन्द्रहरूमा बच्चाहरूले छलफल गर्नुपर्छ। भन– दिनहुँ चार्ट राख्यौ भने सुधार हुन्छ। कसैको तकदिरमा छैन भने फेरि आलस्य गर्छन्। चार्ट राख्नु धेरै राम्रो हो।
तिमीले बुझेका छौ– यो ८४ जन्मको चक्रलाई जानेर नै हामी चक्रवर्ती राजा बन्छौं। कति सहज छ फेरि पवित्र पनि बन्नु छ। यादको यात्राको चार्ट राख, यसमा तिमीलाई धेरै फाइदा छ। नोटबुक राखेनौ भने सम्झ– बाबालाई याद गरेनौ। नोटबुक सदा हातमा लेऊ। आफ्नो चार्ट हेर– कति समय बाबालाई याद गरेँ? याद विना खिया निस्कन सक्दैन। खिया निकाल्नको लागि फलामलाई मट्टितेलमा राख्छन् नि। कर्म गर्दा पनि बाबालाई याद गर्नु छ अनि पुरुषार्थको फल मिल्छ। मेहनत छ नि। यत्तिकै कहाँ शिरमा ताज राखिदिन्छन् र। बाबाले यति उच्च पद दिनुहुन्छ, केही त मेहनत गर्नु छ। यसमा हात-पाउ आदि केही पनि चलाउनु छैन। पढाइ त बिल्कुलै सहज छ। बुद्धिमा छ– बाबाद्वारा हामी यो बनिरहेका छौं। जहाँ गए पनि ब्याज होस्। भन, वास्तवमा कोर्ट अफ आर्म (राष्ट्रिय चिन्ह) यो हो। सम्झाउने धेरै रोयल्टी चाहिन्छ। धेरै मिठाससँग सम्झाउनु छ। कोर्ट अफ आर्मको बारेमा पनि सम्झाउनु पर्छ। बताउनु पर्छ– प्रीत बुद्धि र विपरीत बुद्धि कसलाई भनिन्छ? तपाईले बाबालाई चिन्नु भएको छ? लौकिक पितालाई त ईश्वर भनिदैन। उहाँ बेहदका बाबा नै पतित-पावन, सुखका सागर हुनुहुन्छ। उहाँबाटै धेरै सुख मिल्छ। अज्ञानकालमा सम्झन्छन् आमा-बुबाले सुख दिनुहुन्छ। घर पठाइदिन्छन्। अब तिम्रो हो बेहदको घर। त्यो हो हदको। त्यहाँ माता-पिताले बढीमा ५-७ लाख, करोड देलान्। तिम्रो त बाबाले नाम राख्नुभएको छ पदमापदमपति बन्ने बच्चाहरू। त्यहाँ त पैसाको कुरै हुँदैन। सबै कुरा मिल्छ। धेरै राम्रा-राम्रा महल हुन्छन्। जन्म-जन्मान्तरको लागि तिमीलाई महल मिल्छ। सुदामाको उदाहरण छ नि। चामल मुठ्ठी सुनेका छन् त्यसैले यहाँ पनि लिएर आउँछन्। तर चामल सुक्खा त कहाँ खाइन्छ र। त्यसैले साथमा केही मसला आदि पनि लिएर आउँछन्। कति प्रेमसँग लिएर आउँछन्। बाबाले त हामीलाई जन्म-जन्मान्तरको लागि दिनुहुन्छ त्यसैले भनिन्छ दाता। भक्तिमार्गमा तिमीले ईश्वरको लागि दिन्छौ अनि अल्पकालको लागि अर्को जन्ममा मिल्छ। कसैले गरिबलाई दिन्छन्, कलेज बनाउँछन् भने अर्को जन्ममा पढाइको दान मिल्छ। धर्मशाला बनाउँछन् भने घर मिल्छ किनकि धर्मशालामा धेरैजना आएर सुख पाउँछन्। यो त जन्म-जन्मान्तरको कुरा हो। तिमीलाई थाहा छ– शिवबाबालाई जसले दिन्छ त्यो सबै हाम्रै काममा आउँछ। शिवबाबाले त आफूसँग राख्नुहुन्न। यिनलाई पनि भन्नुभयो– सबै कुरा दियौ भने विश्वको मालिक बन्छौ। विनाशको साक्षात्कार पनि गराउनु भयो, राजाईको साक्षात्कार पनि गराउनु भयो, अनि नशा चढ्यो। बाबाले मलाई विश्वको मालिक बनाउनु हुन्छ। गीतामा पनि छ अर्जुनलाई साक्षात्कार गराउनु भयो। मलाई याद गर्यौ भने तिमी यो बन्छौ। विनाश र स्थापनाको साक्षात्कार गराउनु भयो त्यसैले यिनलाई पनि सुरुमा खुसीको पारा चढ्यो। ड्रामामा यो पार्ट थियो। भागीरथलाई पनि कसैले कहाँ चिनेका छन् र! तिमी बच्चाहरूलाई यो लक्ष्य-उद्देश्य बुद्धिमा रहनु पर्छ, हामी यो बन्छौं। जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। गायन पनि गरिन्छ फलो फादर। यतिबेलाको कुरा हो। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ– मैले जुन राय दिन्छु त्यसैको अनुसरण गर। यिनले के गरे त्यो पनि बताउँछु। उहाँलाई सौदागर, रत्नागर, जादुगर भनिन्छ नि। बाबाले अनायास नै सबै कुरा छोडिदिनु भयो। पहिला उनी रत्नका जौहरी थिए, अहिले अविनाशी ज्ञान रत्नका जौहरी बने। नर्कलाई स्वर्ग बनाउनु कति ठूलो जादु हो। फेरि सौदागर पनि हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई कति महान् सौदा दिनुहुन्छ। कखपन चामल मुठ्ठी लिएर महल दिनुहुन्छ। कति राम्रो कमाई गराउनेवाला हुनुहुन्छ। जुहारतको व्यापारमा पनि यस्तै हुन्छ। कोही अमेरिकन ग्राहक आयो भने उसबाट १०० पर्ने चीजको ५००, हजार पनि लिन्छन्। उनीहरूसँग त धेरै पैसा लिन्छन्। तिमीसँग त सबैभन्दा पुरानो चीज छ, प्राचीन योग।
तिमीलाई अहिले भोलानाथ बाबा मिलेको छ। कति भोला हुनुहुन्छ। तिमीलाई के बनाउनु हुन्छ। कखपनको सट्टामा तिमीलाई २१ जन्मको लागि के बनाइदिनुहुन्छ। मनुष्यहरूलाई केही पनि थाहा छैन। कहिले भन्छन् भोलानाथले यो दिनु भयो, कहिले भन्छन् अम्बाले दिनु भयो, गुरुले दिनु भयो। यहाँ त छ पढाइ। तिमी ईश्वरीय पाठशालामा बसेका छौ। ईश्वरीय पाठशाला भनिन्छ गीतालाई। गीतामा छ भगवानुवाच। तर यो पनि कसैलाई थाहा छैन– भगवान कसलाई भनिन्छ? कसैलाई पनि सोध– परमपिता परमात्मालाई चिन्नु भएको छ? बाबा हुनुहुन्छ बागवान। तिमीलाई काँडाबाट फूल बनाइरहनु भएको छ। त्यसैले गार्डेन अफ अल्लाह भन्छन्। युरोपियनहरूले पनि भन्छन् प्याराडाइज। अवश्य पनि भारतवर्ष परिस्तान थियो, अहिले कब्रिस्तान बनेको छ। अब तिमी फेरि परिस्तानको मालिक बन्छौ। बाबा आएर सुतेकालाई जगाउनु हुन्छ। यो पनि तिमीले बुझेका छौ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो स्वयं जाग्छन्, उनले अरूलाई पनि जगाउँछन्। जगाउँदैनन् भने मानौं स्वयं जागेका छैनन्। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– यी गीत आदि पनि ड्रामामा निश्चित छ। कुनै गीत धेरै राम्रा छन्। जब तिमी उदास हुन्छौ, त्यतिबेला यी गीत बजायौ भने खुसी हुन्छौ। रात के राही थक मत जाना– यो पनि राम्रो छ। अब रात पूरा हुन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन्– जति भक्ति गर्छौ त्यति छिटो भगवान प्राप्त गरिन्छ। हनुमान् आदिको साक्षात्कार भयो भने सम्झन्छन् भगवान मिल्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ– यो साक्षात्कार आदिको कुरा सबै ड्रामामा निश्चित छ। जसको भावना राख्यो त्यसैको साक्षात्कार हुन्छ। तर यस्तो केही हुँदैन। बाबाले भन्नुभएको छ– यो ब्याज त सबैले सदैव लगाइरहून्। किसिम-किसिमका बनिरहन्छन्। यो सम्झाउनको लागि धेरै राम्रो छ।
तिमी रूहानी सेना हौ नि। सेनाको सदैव निशानी हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको पनि यो ब्याज लगाउँदा नशा रहन्छ– हामी यो बनिरहेका छौं। हामी विद्यार्थी हौं। बाबाले हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाइरहनु भएको छ। मनुष्यले देवताहरूको पूजा गर्छन्। देवताहरूले त देवताको पूजा गर्दैनन्। यहाँ मनुष्यले देवताहरूको पूजा गर्छन् किनकि उनीहरू श्रेष्ठ छन्। अच्छा!
१) बुद्धिमा सदा आफ्नो लक्ष्य-उद्देश्य याद राख्नु छ। लक्ष्मी-नारायणको चित्र सदा साथमा रहोस्, यसै खुसीमा रहने गर– म यस्तो बन्न पढिरहेको छु, अहिले म ईश्वरीय विद्यार्थी हुँ।
२) आफ्नो पुरानो चीज चामल मुट्ठी दिएर महल लिनु छ। ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गरेर अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको जौहरी बन्नु छ।
अशरीरीपनको इन्जेक्सनद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने एकाग्रचित्त भव
जसरी आजकल यदि कोही कन्ट्रोलमा आउँदैन, धेरै हैरान पार्छ, चञ्चल हुन्छ वा पागल छ भने उसलाई यस्तो इन्जेक्सन लगाइदिन्छन् जसले गर्दा ऊ शान्त हुन्छ। त्यस्तै यदि संकल्प शक्ति तिम्रो कन्ट्रोलमा आउँदैन भने अशरीरीपनको इन्जेक्सन लगाइदेऊ। फेरि संकल्प शक्ति व्यर्थमा दौडिदैन। सहज एकाग्रचित हुन्छौ। तर यदि बुद्धिको लगाम बाबालाई दिएर फेरि फिर्ता लियौ भने मनले व्यर्थको मेहनतमा पुर्याइदिन्छ। अब व्यर्थको मेहनतबाट छुट।
आफ्नो पूर्वज स्वरूपलाई स्मृतिमा राखेर सबै आत्माहरूमाथि दया गर।